…त्यसपछि उनको सव अर्कैले दाहसंस्कार गरे – " सुलभ खबर "
…त्यसपछि उनको सव अर्कैले दाहसंस्कार गरे
गलकोट – जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा यही भदौ १७ गते आएको बाढीले ठूलोमात्रामा जनधनको क्ष’ति पुर्याएको छ । रातको समयमा बाढी आउँदा सुतेका स्थानीयवासीसँगै ढोरपाटनका आधा दर्जन गाउँ बगरमा परिणत भए । बाढीमा हालसम्म १७ जनाको निधन भइसकेको छ भने अझै २१ बे’पत्ता छन् । हालसम्म फेला परेका श’वमध्ये १५ जनाको मात्र सनाखत भइसकेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १८ गते बिहानैदेखि खोज तथा उद्धारको काम हालसम्म भइरहेको छ तर बाढीको वितण्डा यतिसम्म देखियो कि मृतावस्थामा भेटिएका श’व ‘क्ष’तवि’क्षत अवस्थामा भेटिए । फलस्वरुप परिवारले आफ्नै गुमाएका सन्तानको श’वसमेत ज’लाउ’न पाएनन् । अर्कैले ज’लाइ’दिए ।
जीवनभर आफ्नो सन्तानको माया नहुने बाबुआमा सायदै होलान् । आफूलाई बुढेसकालमा हेरविचार गरुन् भन्ने सोच्छन् र त्यो जिम्मेवारी पनि हुन्छ तर विधिको वि’डम्बना आफ्ना नौजवान छोरासहित परिवारका चार सदस्यसम्म बाढीको वि’पत्मा सदाका लागि गु’माएका छन् । यो त दुःखान्त पी’डाको खबर थियो नै । यसमा अझ पी’डा त बाढीमा बे’पत्ता भएर ज्या’न गु’माएका आफ्नो दिवङ्गत छोराको श’व अर्कैले ज’लाउँदा भएको छ । यो थाहा पाएपछि परिवारलाई कति पी’डा भएको होला ? बे’पत्ता भएको आफ्नो छोरालाई अर्कैले ज’लाउँदा बाबुआमाको मन कति दुखेको होला ? हामी त केवल अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ ।